Naseho ny : 7 aogositra 2021
Tamin'ny 04-05-06 aogositra 2021 teo no nanamarihana ny andron'ny vaksiny Polio teo Madagasikara ho an'ireo faritra ahiana ho misy tranga vaovao. Ny vaksiny ho an'ny lefakozatra dia natao ho an'ny zaza vao teraka hatramin'ny 59 volana. Ny lefakozatra dia aretina efa elabe no nisiany satria tamin'ny taona 1840 no nahitan'ilay Mpitsabo Jacob Heine azy voalohany. Misy karazany telo ny lefakozatra fa kosa voasoroka amin'ny alalan'ilay vaksiny amin'izao daholo...
Aretin'aty na hépatite
Naseho ny : 31 jolay 2021
Isaky ny 28 jolay no fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny "hépatite", tamin'ity taona ity ny loha-hevitra dia hoe : tsy afaka miandry ny aretin'aty. Ny OMS Afrika kosa dia nisafidy ny hoe : tsy afaka miandry i Afrika mikasika ny aretin'aty, satria ny iray amin'ny efatra amin'ny olona mararin'ny "hépatite" dia avy aty afrika daholo. Ny "hépatite" dia fahararian'ny aty vokatry ny fanafihan'ny tsimokaretina ny aty na vokatry ny fandraisana alikaola, fanapoizinana. Misy karazany dimy ny "hépatite" dia A-B-C-D-E...
Naseho ny : 24 jolay 2021
Ny zaza an-tsoson-koditra dia fiforonana sy fipetrahan'ny zaza ivelan'ny tranon-jaza, Mila fandraisana an-tanana aingana ny vehivavy mahazo zaza an-tsoson-koditra satria mety hafaty raha tsy voatsabo. Misy antony maromaro ny mahatonga ny zaza an-tsoson-koditra ka isan'izany ny fisian'ny tsimok'aretina ao amin'ny taovam-pananahan'ny vehivavy, olana amin'ilay fantsona mitondra ny atody ho ao amin'ny tranon-jaza, voka-dratsin'ny fifohana sigara noraisin'ilay vehivevy mitondra vohoka...
Aretina sy fahasarotana mandritry ny hitondran'ny vehivavy vohoka
Naseho ny : 17 jolay 2021
Ny fitondrana vohoka dia tsy aretina fa kosa misy ny fiovana eo amin'ny toe-batana sy ny tsirim-panentana ao amin'ny vehivavy, izay miteraka faharefona eo aminy sy ny zaza ao am-bohoka. Tsy voatery ho sarotra ny aretina mpahazo ny vehivavy amin'ny fotoana hitondrany vohoka, saingy raha tsy voatsabo dia mety hamono hafaty. Ireo aretina mety hitranga : fahaverezan-drà betsaka, afa-jaza, zaza an-tsosokoditra, zaza voaloboka...
Pejy 9 amin'ny 17